Moto X hery, famakafakana ary hevitra | Androidsis
Moto X Force, famakafakana ary hevitra aorian'ny fampiasana azy nandritra ny telo volana
Motorola Fantany ny fomba hamerenany indray ny tenany. Rehefa ny mpamokatra amerikana, novidian'i Lenovo ihany tamin'ny farany, dia namely ny famelezana farany nataony, nipoitra indray toy ny phoenix tamin'ny alàlan'ny Moto G malaza sy ilay tsipika vaovao Moto X.
Nanaitra anay ny mpanamboatra tamin'ny fampahafantarana ny taranaka vaovao Moto X, manolotra fantsona terminal hafa tsy mitovy. Ankehitriny, aorian'ny fampiasana telo volana, mitondra anao feno aho Moto X Force famerenana, finday avo lenta izay miavaka amin'ny fananana iray amin'ireo efijery mahazaka indrindra eny an-tsena.
1 Volavola mahomby sy mahomby
2 Mampiasà traikefa amin'ny Moto X Force: tena henjana ny telefaona
3 Ny toetra ara-teknikan'ny Moto X Force: amin'ny haavon'ny haavon'ny 2015
5 Rindrambaiko tsotra tsy misy fanjanahana
6 Mihoatra noho ny fahaleovan-tena marina
8.1 Sarin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny Moto X Force
11 Isa manohana
12 Hevitra manohitra
Volavola mahomby sy mahomby
Ny zavatra voalohany voamarikao rehefa mandray ny Moto X Force dia terminal mafy orina izy io. Miaraka amin'ny refy 149.8 x 78 x 9.2 milimetatra sy lanja 169 grama, dia mahazo aina tsara ny telefaona. Amin'ny alàlan'ny Moto Maker azonao atao ny manamboatra ny faran'ny Moto X Force, na dia tsy misy aza io serivisy io any Espana. Ilay singa tonga tao aminay dia nanana akorandriaka misy nylon balistic.
Ity fitaovana ity, izay miavaka amin'ny fanoherana avoakany ny fiantraikany, dia manana tena mahafinaritra, Ho fanampin'izany, ny fahasarotany dia manome fangejana tsara eo an-tànana, manakana ny finday tsy ho solafaka. Ny hany saingy hitako dia ny habetsahan'ny loto manintona nylon balistic. Indraindray dia tsy maintsy omenao amin'ny lamba mando izany mba tsy hanangona vovoka. Ny ratsy kely ambany dia ambany noho ny fanoherana mahery vaika an'ity fitaovana ity.
ny Moto X Force eo aloha Izy ireo dia lehibe kokoa noho ny an'ny maodely hafa, zavatra ara-dalàna raha toa ka raisintsika ny toetra mampiavaka ny efijery. Eo amin'ny farany ambany dia ahitantsika ny fivoahan'ny mpandahateny roa, na dia ho an'ny mpandahateny anao aza ny iray, fa ny iray kosa kosa tena mikropono.
Ny bokotra mandeha sy ivelan'ny terminal, ary koa ny fanaraha-maso ny volavola, hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny Moto X Force, dia manome henjana sy fahatsapana mafy rehefa voatsindry. Izany rehetra izany dia nalahatra tamin'ny a vatana aluminium izay mametraka ny lamandy amin'ny telefaona misy endrika mahonon-tena, famaranana kalitao ary manome fahatsapana filaminana noho ny efijery mahatohitra azy.
Mampiasà traikefa amin'ny Moto X Force: tena henjana ny telefaona
Ary io no teboka tena mahavariana indrindra an'ny Moto X Force miaraka amin'ny efijery tsy vaky. Fa henjana toa ny nolazain'izy ireo ve? Ny marina dia raha. Telo volana aho niaraka tamin'ny Moto X Force ary efa nolazaiko taminao fa mahatanty mibontsina izy ary milatsaka nefa tsy vaky ny efijery.
Tsy hamitaka anao aho: Ny andro vitsivitsy voalohany dia nazerako indroa ny telefaona hahitako ny toetrany. Nandalo tamina taratasy kely izy. Raha vantany vao hitako fa tena mahatohitra tohina sy fianjerana ny Moto X Force, dia nanapa-kevitra ny hanome azy io ho zavatra voajanahary kokoa aho, nefa tsy nanery ny toe-javatra. Raha somary saro-kenatra aho dia nazava tsara fa na ho ela na ho haingana dia hijaly ny telefaona. Izany no izy.
Ao anatin'ireo telo volana ireo Im-polo taona no tiako ny telefaona. Ny efijery dia nanohitra tanteraka noho ny haitao ShatterShield. Ho an'ity, ny efijery Moto X Force dia manana sosona dimy izay manana ireto toetra manaraka ireto:
Layer 1: Vita amin'ny aliminioma henjana, io no sosona izay ampidirina amina sisiny sisa, manome faharetana sy fitoviana eo amin'ny efijery.
Layer 2: Eto no misy ny efijery AMOLED, novolavolaina tamin'ny fomba manokana ka somary malefaka kokoa izy nefa tsy very kalitao.
Layer 3: io ilay sosona azo ampitaina, ilay tompon'andraikitra amin'ny fandefasana ny fitepesantsika. Mariho fa ity sosona ity dia avo roa heny ka raha ny iray amin'izy ireo dia vaky noho ny fiantraikany, ny sosona hafa dia mamela ny telefaona hijanona miasa.
Layer 4: sosona miaro amin'ny mangarahara faran'izay avo miaraka amin'ny fanoherana avo izay tsy manapotika na vaky ny fiantraikany sy ny kapoka. Tompon'andraikitra amin'ny fisorohana ireo triatra mahatahotra tsy hiseho eo amin'ny efijery aorian'ny kapoka.
Layer 5: ny sosona farany no ampiasaintsika, miaraka amin'ny toetra mampiavaka azy mitovy amin'ny sosona fahefatra, na dia miaro amin'ny abrasion sy ny agents ivelany hafa aza izy io.
Ny antsipiriany mahaliana dia ny, Taorian'ny volana voalohany nampiasako dia nampihena tsy nahy ny fikarakaran'ny Moto X Force: tao anatin'ny roa herinandro dia nazerako imbetsaka noho ny iray volana teo aloha. Izany dia manazava ny fahatsapana filaminana izay anoloran'ity telefaona ity amin'ny resaka fanoherana ny fianjerana.
Mazava ho azy fa misy lafiny sasany tsy maintsy mahafeno fepetra. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fanoherana ny terminal. Na dia marina aza fa ny efijery an'ny Moto X Force dia mahazaka fampijaliana tsy tapaka, ny firafitry ny telefaona dia mijaly isaky ny mahavoa na milatsaka noho izany, toy ny fitaovana hafa rehetra, ny vatan'ny Moto X Force dia hiaritra mararin'ny palatra na vongan-kazo tampoka.
Ary avy eo misy lafiny iray hafa izay nandiso fanantenana ahy manokana, ary betsaka: na dia saika tsy vaky aza ny efijery an'ny Moto X Force, gorodona mora foana. Raha tsy mampiasa karazana mpiaro ny efijery na fonony aho, tao anatin'ny roa herinandro latsaka dia efa nanana ny ratra voalohany teo amin'ny efijery aho.
Ok, azonao atao ny mametraka mpiambina efijery hialana amin'ny fikororohana ny efijery, saingy mahasosotra ity antsipiriany ity Na izany na tsy izany, miaraka amina mpiaro iray mba tsy hijalian'ny gorodona. ny Moto X Force dia azo ampiasaina tsara tsy misy karazana fonony, Iray amin'ireo tokana avo lenta, raha tsy izy irery ihany, izay mahazaka izany rendrarendra izany. Ary ho an'ny olona somary sarotiny, toa ahy, izany dia antsipiriany tokony horaisina.
Ny toetra ara-teknikan'ny Moto X Force: amin'ny haavon'ny haavon'ny 2015
lafiny X X 149.8 78 9.2 MG
efijery 5.5-mirefy malefaka AMOLED miaraka amina vahaolana 2560 x 1440 pixel ary 540 dpi miaraka amin'ny haitao Shatterproof
processeur Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 valo fototra (Quad Core Cortex A -57 hatramin'ny hafainganana 1.5 GHz ary Quad Core Cortex A-57 hatramin'ny hafainganana 2.0 GHz)
ram 3 GB karazana LPDDR4
Tahiry anatiny 32 na 64 GB azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 256 GB arakaraka ny maodely
Fakan-tsary aoriana 230 megapixel Sony IMX 21 sensor miaraka amin'ny f / 2.0 27 mms / OIS / autofocus / detection face / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p video recording amin'ny 30fps na horonan-tsary 2K ao amin'ny 30 fps
Fakan-tsary mialoha 5 MPX miaraka amin'ny flash LED aloha; Horonantsary 1080p
Conectividad DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; 3G bands (HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - XT1580) 4G sy ny tariny 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 20 (800) 25 (1900) 28 (700) 40 (2300) - XT1580
Fitaovana hafa Vatana metaly / efijery tsy mahazaka / fanoherana manohitra / rafitra famandrihana haingana
bateria 3.760 mAh tsy azo esorina
vidiny 690 euro amin'ny Amazon
Su Processor Qualcomm Snapdragon 810 ary 3 GB RAM karazana DDR4 no mahatonga ny Moto X Force eo amin'ny haavon'ny terminal farany tsara indrindra, fa hatramin'ny taona lasa 2015. Nefa tsy maintsy tadidintsika fa ity finday ity dia tsy tonga ny farany fanapahana indrindra, fa ho be indrindra mahatohitra ny isan'andro isan'andro. Ary io tanjona io dia mahatanteraka azy tsara. Farafaharatsiny fantatsika fa tsy ilaina ny mitondra fonony hatrizay, na izany aza Ny Moto X Force dia hijaly maratra sy marika amin'ny tranga misy azy, tsy ho tapaka ny efijery finday.
Miaraka amin'ireo toetra teknika ireo ny ekipa miasa tanteraka, araka ny nandrasana. Nandeha namaky ny varavarankeliny tamin'ny fomba mivaingana aho, nilalao lalao, na toy inona na toy inona herin'ny sary ilainy, tsy misy olana.
Ny iray amin'ireo zavatra nampitebiteby ahy dia ny fanodinana Qualcomm Snapdragon 810 miady hevitra matetika izay nisafidy ny Motorola sy Qualcomm kinova faharoa an'ny soC flagship an'ny 2015 hialana amin'ireo olan'ny fampisehoana mampatahotra.
Ny vokany? Amin'ny AnTuTu ny Moto X Force dia nahatratra teboka 93.000, olo-malaza tena mahaliana. Ary ny zava-dehibe indrindra: nilalao nandritra ny ora maro aho nefa tsy niakarako akory ny fiakaran'ny maripana, noho izany dia azoko antoka fa Moto X Force dia tsy mijaly noho ny olana tafahoatra.
Miaraka amin'ny Snapdragon 810, voafetra ny zava-bita rehefa manafana ny processeur. Ity rafitra fiarovana ity dia manakana ny processeur tsy hiakatra ambonin'ny mari-pana sasany, hisorohana ny terminal tsy hamindroana.
Ny antso "Thermal Throttling" dia mametra kely fotsiny ny fahombiazan'ny telefaona rehefa miasa mandritra ny fotoana maharitra ny enta-mavesatra be, na dia tsy mila miahiahy momba izany aza isika, satria ny ankamaroan'ny rindranasa dia voalamina mba hivezivezena amina fotokevitra tokana hany ka tsy voaditra loatra ny rafitra.
Ary miaraka amin'ny lalao, na dia mihena kely aza ny zava-bitan'ny processeur aorian'ny fampiasana lava, tsy mbola nisy fotoana nahatsikarako karazana lag na drop frame. Aleo tadidintsika fa miresaka isika terminal iray izay manana iray amin'ireo processeur tsara indrindra tamin'ny taon-dasa.
Ny fehin-teniko momba an'io dia tena tsotra: na eo aza ny terminal misy toetrany somary lany andro raha tadidintsika ny vidiny fanombohana, 699 euro, ny Moto X Force dia miasa tsara, mamela anao hankafy ny fampiharana, ny lalao video na ny atiny multimedia tsy misy olana.
Ny iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra amin'ny telefaona dia ny kalitaon'ny efijery. Ary eto ny ekipa Motorola dia nanisy peta-kofehy azy tamin'ny fampidirana azy tao amin'ny Moto X Force a Ahinjiro tontonana AMOLED Mahatratra ny famahana ny 2K (1440 x 2560 teboka) sy 544 dpi. Saika tsy misy.
Efa niresaka lava momba ny fanoherana avo ny efijery izy, noho ny haitao ShatterShield. Ankehitriny dia anjaran'ny kalitaon'ny sary. Ary eto, tsy dia miavaka toy ny amin'ireo fitaovana hafa mampifangaro ireo takelaka AMOLED, Ny seho P-OLED an'ny Moto XD Force dia nanatitra.
ny loko mazava tsara miaraka amin'ny maranitra sy ny zoro fahitana. Ny fifandanjana eo amin'ny tsy fitoviana sy ny famirapiratana dia marina, mamela ny famakiana tsy misy olana eo amin'ny efijery amin'ny jiro mamirapiratra. Amin'ny fametrahana ny famirapiratana farafaharatsiny, tsy hanana olana amin'ny famakiana ao anaty haizina tanteraka ianao raha tsy manelingelina ny famirapiratan'ny efijery.
Niahiahy momba ny faritra nikitika aho satria ny fifandraisana dia tsy mifandray amin'ny tontonana P-OLED satria mitranga amin'ny telefaona izay mampiasa tontonana AMOLED tsy elastika. Na izany aza, tonga lafatra ny valin-kafatra, Tsy niaritra karazana fahatarana tamin'ny fampiasana Moto X Force aho tao anatin'izay telo volana izay.
Tsy mbola nitranga tamiko izany fa tiako ny milaza fa, amin'ny fararano sasany, ny sosona voalohany dia mety ho voadona, na dia tsy tapaka aza. dia Motorola dia manome antoka maharitra efa-taona manarona ny fahasimbana amin'ny sosona voalohany sy faharoa amin'ny efijery Moto X Force.
Rindrambaiko tsotra tsy misy fanjanahana
Ny iray amin'ireo zavatra nianaran'i Motorola taorian'ny nandalovany tao amin'ny Google dia ny maha-zava-dehibe ny fanomezana terminal miaraka a fanaingoana ambany. Amin'izany fomba izany, ny mpanamboatra dia manome antoka ny fanavaozana somary mailaka kokoa noho ny ambiny.
Izaho manokana dia mankasitraka izany vitsy ny rindranasa sy ny fampiasana azo apetraka mialoha, amin'ny maha galeria feno azy. Ho fanampin'izay, Motorola dia nampiditra fiasa kely toy ny famadihana ny telefaona indroa hanokafana ny fakan-tsary na hanozongozona azy mba hampihetsika ilay flash izay hitako fa tena ilaina sy mahaliana.
Antsipiriany iray hafa tiako ny rafitra fampandrenesana "Ambient Display" izay ahitantsika izay manoratra ho antsika amin'ny alàlan'ny efijery AMOLED satria ny faritra banga ihany no alehany. Amin'izany no ahafahantsika mahita izay mahatratra ny telefaona nefa tsy mila manokatra azy io.
Ary tsy afaka manadino aho ireo sensor akaiky azy izay mahatsikaritra rehefa misy hetsika vitsivitsy eo akaiky eo ary mampihetsika ny fotoana sy fampandrenesana eo amin'ny efijery. Tamin'ny voalohany dia toa hafahafa tamiko izany, satria ny hetsika kely indrindra dia mampihetsika ny efijery, saingy rehefa afaka kelikely dia toa safidy mahasoa sy mahaliana ilay izy.
Izany rehetra izany ambanin'ny Android 6.0 MarshMallow, mihazakazaka miaraka amin'ny traikefa an-tsary an'ny Google Now Launcher. Amin'izany fomba izany no ahitantsika boaty misy ny rindrambaiko izay haingana sy mora ampiasaina.
Mihoatra noho ny fahaleovan-tena marina
Mihevitra fa manana ny Moto X Force Bateria 3.760 mAh, nantenaina fa niavaka ny fizakan-tenany. Ary izany dia, na dia misy ny nuansa aza. Ny tiako holazaina dia tsara fitondran-tena ny telefaona, nahatratra iray andro sy sasany ny fahaleovan-tena raha toa ka nomeko fampiasana milamina kokoa izy io, fa maty tamin'ny alina tamin'ny andro iray henjana.
Nametraka ny rindranasa rehetra ilaiko aho, nanamboatra tambajotra sosialy ary serivisy fandefasan-kafatra ary nomeko azy ny tehina hanome ny findaiko manokana sy ny fizakantena antenaiko bebe kokoa amin'ny haavon'ny Huawei Mate 8.
Andro iray lehibe, famaliana fampandrenesana, mailaka, fitetezana Internet, fihainoana mozika ary filalaovana lalao, amin'ny alina ny Moto X Force dia tonga tamiko fa 15-20% isan-jato.
Fantatro fa endrika tsara raha ampitahaina amin'ny telefaona hafa, saingy mamela ahy mamy ihany izy io. Toy izany koa, raha toa ka nampiasa tontonana IPS tsara izy ireo miaraka amin'ny vahaolana 1080p dia mety ho ampy izany, ary koa fanatsarana ny fizakantenan'ny Moto X Force izay, tsara kokoa noho ny salan'isa dia ho hitako fa rariny raha jerena ny 3.760 mAh.
Mazava ho azy fa tsy maintsy asongadintsika izany Rafitra famahanana haingana ny herinaratra, manana Motorola ary mamela ny Moto X Force hamerina fiakarana tampony tsara ao anatin'ny minitra vitsy. Nahavita fitsapana maro aho ary tao anatin'ny antsasak'adiny dia nameno ny antsasaky ny telefaona aho ary tao anatin'ny adiny iray dia 100% izany.
El ny mpandahateny dia tsy ny teboka matanjaka an'ny Moto X Force. Ny mpandahateny tokana, miorina amin'ny grille mety, dia manome feo mono somary mazava, na dia tsy manana treble sy bass aza izy.
Ireo kapila an-tariby miaraka amin'ny Moto X Force dia ireo izay niaraka tamin'ny tsipika Moto X hatramin'ny nanombohany. SASANY finday tsara kalitao Manolotra kalitaon'ny feo tsara izy ireo, na dia tsy be mpitia aza, na dia mihoatra noho ny an'ny ankamaroan'ny mpampiasa aza izany.
Asongadino izany ny volume sy ny kalitaon'ny antso dia tsara, zavatra mitombina raha heverintsika fa ny Moto X Force dia manana microphone dimy mihetsika.
Ny Moto X Force dia manana iray amin'ireo fakantsary tsara indrindra eny an-tsena. Tsotra toa izany. Ny solomaso anao Sony IMX 230 Miaraka amina sensor 21 megapixel izay manome aperture an'ny f / 2.0 sy 1 / 2.4 santimetatra, dia mamela fifantohana tsara ankoatry ny fakana sary tsara amin'ny tontolo tsy dia mazava loatra.
Izany dia tsy maintsy ampidirintsika amin'ny fanavaozana ny Android 6.0 Marshmallow azontsika atao mandrindra mora foana ny fampisehoana, fanatsarana ny fahafahan'ny fakantsary tsy ampitomboina ny fahasarotan'ny fampiasana azy.
Ary izany no blocker fifantohana sy fampiroboroboana Io dia hahafahantsika mamoaka ilay mpaka sary izay entintsika ao anatiny nefa tsy be pitsiny loatra. Mazava ho azy, ny rindrambaiko fakantsary dia somary tsotra ka raha te hampiasa ny ankamaroan'ny mety ho fakan-tsary ianao dia tsy maintsy mitady vahaolana tsara kokoa ao amin'ny magazay fampiharana Google. Tsy azonay adino ny taratra tariby LED roa tonony izay manampy amin'ny fanatsarana ny sary nalaina.
La fakan-tsary eo aloha dia 5 megapixels ary misy flash LED ihany koa hahafahanao maka sary tsara amin'ny tontolo iainana tsy dia mazava loatra ianao. Famenon-tsakafo mety indrindra ho an'ireo tia sary-tena.
Sarin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny Moto X Force
Ny zavatra niainako niaraka tamin'ny Moto X Force dia tena tsara. Fitaovana iray miaraka amin'ny fampitaovana fampifanarahana sy fanoherana lehibe izay nahavita nampiasa telefaona iray indray nefa tsy nisy fonony.
Amin'izao fotoana izao, misy telefaona avo lenta mila tranga raha tsy mitandrina tsara ianao. Ary na izany aza dia mety ho tratry ny lozam-pifamoivoizana foana ianao. Miaraka amin'ny Moto X Force dia manjavona io ahiahy io aorian'ny andro vitsivitsy nampiasana azy. Tahaka ny fananana Nokia 3310 misy fiasa tsara.
Ary ny zava-misy amin'ny tsy maintsy hametrahana mpiambina efijery hisorohana ny fikororohana tsy hikorontana dia toa faharatsiana kely mieritreritra fa tsy hijaly noho ny fahasimbana avy amin'ny maro ny tontonana, toa ahy izany antony izany.
Raha mitady telefaona mahatohitra tena misy endri-javatra avo lenta ianao dia aza misalasala fa ny Moto X Force no safidy tsara tokony hodinihina.
Ny efijeryo dia mahatanty ny rano mitete sy mibontsina nefa tsy tapaka
Fahaleovan-tena tsara sy rafitra famerana haingana be
Ny fakantsary Moto X Force dia manolotra fakana sary tena tsara
Mikorisa toy ny telefaona hafa ihany koa ny écran
Ny Motorola Moto X Force dia tsy manana Radio FM
Somary avo ny vidiny, na dia tsy maintsy raisina aza ny fanoherana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Moto X Force, famakafakana ary hevitra aorian'ny fampiasana azy nandritra ny telo volana
Esteban Donoso dia hoy izy:
Nividy ny fitaovako aho tamin'ny volana Janoary ary tamin'ny fiandohan'ny volana Mey dia nanomboka tsy nahomby izy io, tsy nahafantatra ny charger turbo ary ny bateria dia tsy nitombo 4%, tao ST izy ireo dia tsy afaka namantatra ny lesoka ary hanome ahy izy ireo vaovao
Valiny tamin'i Esteban Donoso
Giovanni Oliden (@giovanni_oliden) dia hoy izy:
Fanamarihana tsara, hevitra iray fotsiny. Voasarona ny sosona izay ifandraisanao, saingy toy ny mika izy io ary azo soloina. fiarahabana
Valiny tamin'i Giovanni Oliden (@giovanni_oliden)
Manana ny Moto X Force hatramin'ny volana janoary aho, ny olana tokana nananako dia ny famerenana indray mandeha imbetsaka. Mikasika ny efijery dia nasiako solomaso fitaratra, tsy misy ho an'ny X Force izany, saingy mbola misy ilay iray ho an'ny ny lalao X, toy izao izay azon'izy ireo dinihina.ary farany, rahoviana no havoaka ireo karatra SD 2 Terabyte? Ny maodely ananako dia fitadidiana anatiny 64G. Misaotra Miarahaba. ATTE Ernesto R. Ronzón
Fallout Shelter dia handray iraka, tarehintsoratra vaovao ary kinova PC amin'ny volana Jolay
Avereno ny fahatsiarovana very ao amin'ity PvP-heavy Action-RPG antsoina hoe Combo Clash ity